Thursday December 04, 2014 - 16:47:01 in Wararka by Super Admin
Dalka Suudaan waxaa heegan sare la geliyay Laamaha ka shaqeeya dhinaca Caafimaadka kadib markii ay soo shaac baxday in Cudurka Ebola laga helay Gobolka Koonfurta Suudaan ee horey dalkaas uga go'ay, islamarkaana tiro dhowr ruux ah ay Cudurkaas u
Wararka dalkaas ka imaanaya waxay sheegayaan in xaalad deg deg ah laga iclaamiyay guud ahaan gobollada dalka Suudaan, iyadoo maamulayaasha Caafimaadka ay ku dhawaaqeen inay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah oo ay uga hortagayaan in Cudurkaas halista ah uu dalka ku faafo, waxaana gebi ahaanba la joojiyay in gobollad kuyaalla dhinaca waqooyiga ay soo galaan dadka ka imaanaya Koonfurta Suudaan.
Xaaladdan feejingaanta iyo taxadarka ah ee dalkaasi looga dhawaaqay ayaa waxay ka dambeysay markii Hey'ad Gaaleedka qaabilsan waxa loogu yeero Caafimaadka Adduunka ay sheegtay in Koonfurta Suudaan laga helay 19 ruux oo qaba Viruska halista ah ee dhaliya Cudurka Ebola, waxaana la xaqiiiyay in 5 ruux oo dadkaas ka mid ahaa ay u dhinteen Cudurka.
Gobollada kuyaalla Xuduudaha iyo Garoomada diyaaradaha ayaa si aad ah loo adkeeyay baaritaannada Caafimaad ee laga sameynayo, Saraakiisha Caafimaadku waxay sheegayaan in goobahaas la geeyay talaal dadka lagu durayo, kaas oo ay ugu yaraan difaac u noqon ka hortagga Cudurkaas halista ah ee faraha ba;an ku haya wadamo dhowr ah oo kuyaalla Qaaradda Afrika.
Maamulaha Waaxda duulimaadka Rayidka ee dalka Suudaan Axmed Baajuuri ayaa sheegay inay kulamo saacado badan qaatay ay dhex mareen shaqaalaha ka shaqeeya duulimaadka rayidka iyo hey'adaha Dowladda u qaabilsan dhinaca Caafimaadka, kulamadaas oo looga arrisanayay ka hortagidda Cudurka Ebola waxaa laga soo saaray go'aanno ay ka mid yihiin in dadka qaba Cudurkaas ee kasoo jeeda wadamada kuyaalla galbeedka Qaaradda Afrika inaan loo ogolaan inay dalka Suudaan kasoo dagaan.
Wasaaradda Caafimaadka ee Suudaan ayaa farriimo u kala dirtay Wasaaradaha dhiggeeda ah ee dunida iyo Hey'adaha Caalamiga ah ee xiriirka ay la leedahay, waxaana arrimaha ay kala hadashay ka mid ah go'aan ay Xukuumadda Khartuum gaartay oo ah in talaalka ka hortagga u ah Cudurka lagu duro Shaqaalaha iyo rakaabka la socda diyaaradaha duulimaadka ee kasoo dagaya ama ka duulaya Garoonka magaalada Caasimadda ah.
Cudurka halista ah ee Ebola ayaa loo aqoonsaday kan ugu faafitaanka badan dunida, iyadoo hadda uu faro kulul ku hayo dalal badan oo kuyaalla galbeedka Qaaradda Afrika oo ay ka mid yihiin Gini, Leybeeriya, Neyjeeriya, Siiraalyoon iyo Koonfurta Suudaan.
Tirakoobyadii ugu dambeeyay ee la sameeyay waxay sheegayaan in 17 kun oo ruux oo ku nool galbeedka Qaaradda Afrika inay qaadeen Viruska dhaliya Cudurka ayaa haddana tirakoobyada ay dowladuhu sameeyeen waxay tilmaamayaan in Lix kun oo ruux oo dadkaas ka mid ah inay u dhinteen, taas oo ka dhigan in 60-70% dadka Viruska qaaday inay naftooda waayeen, laakiin khubarrada Caafimaadka ayaa aaminsan in tirada dhimashadu ay intaas aad ugu badan tahay.
Wasiirka Caafimaadka ee Suudaan ninka lagu magacaabo Baxar Idriis Abuu Qarda ayaa xusay in illaa iyo hadda aysan heynin wax xaalado ah oo tilmaamay in dad qaba Cudurkaas ay ku suganyihiin gudaha dalka, balse wuxuu sheegay inay wadaan dadaallo ay ka hortag ah oo ay ku wajahayaan khatar walba oo la filan karo.
Abuu Qarda wuxuu sheegay inay abuureen guddiyo caafimaad oo ka howl galaya gobollada iyo shaqaallo caafimaad oo ka shaqeynayay garoomada diyaaradaha iyo deegaannada xuduudaha kuyaalla, waxaana la diyaariyay xarumaha gooni ah oo karantiil ah oo loogu talo galay dadka laga cabsida qabo in Cudurkaas uu saameeyo.
Illaa iyo hadda ma jirto dawo rasmi ah oo dabar goyn ah oo Cudurka uu leeyahay marka laga reebo dhowr talaal oo ka hortag ah, koox baarayaal ah oo ku sugan Gobolka Merland ee dalka Mareykanka oo ayaa sheegay inay wadaan dadaallo ku aadan soo saaridda talaal ama dawo lagu dabar goynayo Cudurka ayaan illaa iyo hadda baaritaanadooda wax natiijo ah soo bandhigin.